News | Myanmar Doing Business
Yangon Building Permit System(YBPS)
By supporting of IFC (World Bank Group), city council naming Yangon City Development Committee (YCDC) developed Yangon Building Permit System(YBPS) Website ybps.ycdc.gov.mm for building construction permitting submission upon risk based categorization. Website was fully launched on 15th March 2020, and after that YCDC enforced and awarded to public to submit by using website only, started from 27th April 2020.
Doing Business Report 2020 Myanmar
ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ထုတ်ပြန်သည့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် Doing Business Report ( Myanmar )ကို အများပြည်သူများသိရှိစေရန်အတွက် ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် Doning Business အဆင့်နှင့် ရမှတ်တိုးတက်ရေးအတွက် စဉ်ဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ယခုနှစ်တွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများအတွက် ရလာဒ်ကောင်းကိုရရှိလာပြီဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် အစီရင်ခံစာ အရ မြန်မာနိုင်ငံ၏ Overall အဆင့်မှာ ၁၆၅ဆင်.၊အမှတ် ၄၆.၈မှတ် ရရှိပြီး ယခင်နှစ်ထက် အဆင့် ၆ဆင့်၊ အမှတ်မှာ ၂.၀၈ မှတ် ပိုမိုရရှိခဲ့ပါသည်။ အဆင့်တက်ခဲ့သော အညွှန်းကိန်းများမှာ StartingaBusiness , Dealing with Construction permits, Registering Property,Protceting Minority Investor န
၁။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်က နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရလွယ်ကူမှု အစီရင်ခံစာ ၂၀၂၀ (Doing Business 2020) တွင် တိုးတက်မှုအဖြစ် ဖော်ပြနိုင်သော ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု အကောင်းဆုံး နိုင်ငံ (၂၀)တွင် မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ Doing Business Website တွင် ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့က ဖော်ပြထားပါသည်။ (https://www.doingbusiness.org/ en/reforms/top-20-reformers-in-db2020)
Registering Property Indicator Video Conferencing at 4th April
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၄) ရက်၊ ကြာသပတေးနေ့တွင် Hilton Hotel၊ နေပြည်တော်၌ Registering Property Indicator အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များ နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရုံးချုပ်မှ Doing Business ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ Video Conferencing ပြုလုပ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
Resolving Insolvency Indicator & Enforcing Contracts Video Conferencing at 4th April
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၄) ရက်၊ ကြာသပတေးနေ့တွင် Hilton Hotel၊ နေပြည်တော်၌ Resolving Insolvency Indicator နှင့် Enforcing Contracts Indicator အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များ နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရုံးချုပ်မှ Doing Business ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ Video Conferencing ပြုလုပ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
Trading Across Borders Indicator အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ကမ္ဘာ့ ဘဏ်ရုံးချုပ်မှ Doing Business ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များ Video Conferencing ပြုလုပ် ဆွေးနွေးသည့် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၈) ရက်၊ တနင်္လာနေ့၊ နံနက် ( ၁၀: ၀၀ ) နာရီအချိန်တွင် ရုံးအမှတ် (၃)၊ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အပေါ်ထပ်အစည်းအဝေးခန်းမ၌ Ease of Doing Business Ranking တိုးတက်စေရေးအတွက် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဒုတိယဝန်ကြီးဦးဆောင်သည့် သက်ဆိုင်ရာ Doing Business အထောက်အကူပြုအဖွဲ့ဝင်များ နှင့် World Bank Group ၏ (IFC) အဖွဲ့တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည့် အစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၄) ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ နေ့လည် ( ၁:၃၀ ) နာရီ အချိန်တွင် Hilton Hotel၊ နေပြည်တော်၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် Ease of Doing Business Ranking တိုးတက် စေရေးအတွက် Registering Property Indicator အဖွဲ့နှင့် World Bank Group မှ Doing Business Expert ဖြစ်သူ Mr. Frederic Meunier ဦးဆောင်သောအဖွဲ့တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည့် အစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၃) ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ နေ့လည် ( ၁၅:၃၀ ) နာရီအချိန်တွင် ရုံးအမှတ် (၃)၊ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ တိုးချဲ့အစည်းအဝေးခန်းမ၌ Ease of Doing Business Ranking တိုးတက်စေရေးအတွက် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် Trading Across Borders Indicator အဖွဲ့နှင့် World Bank Group မှ Doing Business Expert ဖြစ်သူ Mr. Frederic Meunier ဦးဆောင်သောအဖွဲ့တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည့် အစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။